China Cement Silo Ukwenziwa kunye Factory | UJusheng
Butterfly Valve Kuba Cement nesisele
Isamente iSilo Auger
Iisilos zesamente, ekwabizwa ngokuba ziitanki zesamente, zinokwahlulwa zibe silo sesahlulo kunye nesisele esidibeneyo sesamente. Split silo ngokubanzi ilungele ukuthuthwa kwekhonteyina ukugcina iindleko zothutho kunye nomjikelo. Isamente isetyenziswa kunye nesityalo esixhasayo sokuxuba ikhonkrithi, kwaye umsebenzisi ubuyisela iisilos zesamente ngamandla ahlukeneyo kunye nobungakanani ngokokuphuma kwesityalo sokuxuba. Elinye lawona macandelo aphambili kwisityalo sokuxuba ikhonkrithi. Ukongeza kugcino lwesamente, inokugcina izinto ezininzi, ezifana ne-fly ash, i-ore ecoliweyo, udaka olomileyo, iinkozo, njl njl. Isisele sinemithombo yokuthintela imvula kuphela, ubungqina bokufuma kunye nezinto ezilula ukuzisebenzisa. Ingasetyenziswa kunye neevaluva zebhabhathane, ukuhambisa izinto, imikhono yokuqhagamshela eguqukayo, njl. Isisele ngokubanzi siqulathe umqokeleli wothuli kunye nevalve yokukhupha uxinzelelo. , Inqanaba eliphezulu kunye nelisezantsi kwinqanaba lokulinganisa, isitya somoya sokuhambisa, ukukhupha isango ibhabhathane yevalve, isixhobo sokucoca kunye nekhabhathi yolawulo. Ukuhamba okutywinwe ukuqinisekisa indawo yokusebenza engenothuli.
Umzekelo No. Umthamo Ubukhulu beSilo Ukuphakama kwesilili Ukukhupha ukuphakama
DKS50T 50T I-3.16m I-12.9m 4.5m
DKS80T 80T I-3.16m 15.70m 4.5m
DKS100T 100T I-3.16m 17.2m 4.5m
DKS150T 150T I-3.16m 21.4m 4.5m
Yiya kwi-DKS200T 200T 4.5m 17.8m 4.5m
Imodeli yesilo Umthamo wezityalo Yangaphakathi kwisityalo ngasinye
Ikhonkco I-120m³ / h 1/4
Isamente yesisele yenziwe ikakhulu nge-Q235 yesityalo sentsimbi ukugcina isamente. Iineentlobo ezimbini, isililo esineebhotile kunye nesilo esine-welding, amandla esisele avela kwi-30t-1000t.
Isisele sesamente siquka ezi zinto zilandelayo: ukuphuma, iqonga lolondolozo, umzimba wetanki, ileli, i-guardrail, ipayipi yokutya, umqokeleli wophahla lothuli, iveluva yokukhupha uxinzelelo, igeji yenqanaba eliphezulu kunye nelisezantsi, isitya segesi esincedayo, ikhupha ivalve yesango lebhabhathane, isixhobo sokucoca ulwelo Ulawulo lwekhabhinethi
Flake Indawo yokugcina isamente
1. Kulula ukuyifaka kwaye uyiqhaqhe isisele esinezinto ezinqabileyo.
2. Ingapakishwa kwaye ihanjiswe ngokulula.
3. Ukusebenza ngokutywina okuqinileyo.
4. Inkangeleko entle.
Ukufakwa: Isisele sesamente sineepleyiti zentsimbi, ezidityaniswe ziibholithi, ekulula kakhulu ukuzidibanisa nokudibanisa. Abasebenzi abanamava banokugqibezela ukufakelwa kwesisele sesamente ngokufaka iividiyo okanye imiyalelo yokufaka.
Umthamo: Isisele se-bolt samente sinokusetyenziselwa iitoni ezingama-50, iitoni ezili-100, iitoni ezingama-200, iitoni ezingama-300, iitoni ezingama-500, iitoni ezili-1000. Ubungakanani bokugqibela benziwe ngokweemeko zendawo kunye neemfuno zengingqi, ngoko ke isisombululo ngasinye sesamente sesilili sodwa kumthengi.
ukuba unemibuzo，pls nxibelelana nathi: sales@dongkunchina.com
ISililo eDibeneyo Ukuveliswa kweMveliso
1. Iitanki zesamente zihlala zisetyenziswa njengeemveliso ezixhasayo izityalo zokuxuba eziphathekayo (izakhiwo).
2. Kufanelekile ukuba kulayishwe isamente eninzi kunye nothuthu lwempukane eyomileyo. Inempawu zemvula, ubungqina bokufuma kwaye kulula ukuyisebenzisa; ukucaciswa kunye nobukhulu bunokwenziwa ngokweemfuno zabathengi.
3. Ngokubanzi sisakhiwo senkxaso yombhobho, nezixhobo zokususa uthuli kwinxalenye ephezulu ukunqanda ukuvuza kothuli, kunye nesixhobo sokuqhekeza i-arch kwicandelo elisezantsi ukuthintela umgubo ekuhlanganiseni kwaye wenze umgubo ukothule ngokutyibilikayo. Ikwaxhotyiswe ngezixhobo ezibonakalayo zenqanaba, ezinokulawulwa nangaliphi na ixesha. Ukusetyenziswa kwezinto.
4. Ngokubanzi, iloli yokuhambisa isamente eninzi isetyenziselwa ukuthumela irhasi yomgubo kwisisele; ngokwesakhiwo sesisele sesamente, kukho iindlela ezimbini ngokubanzi zokukhuphela umbandela, enye kukudibanisa icandelo elisezantsi kwisilayidi sokuhambisa, kwaye usebenzise isixhobo sokuhambisa isikhululo ukuthumela umgubo kumgubo. Okwesibini kukuhambisa ukuhambisa umoya (kwiitanki zesamente ezinezakhiwo ezizodwa).
5. Isisele sesamente sinesakhiwo esilula, ukufakelwa okufanelekileyo, indawo encinci yomgangatho, utyalomali oluphantsi, ukuhamba okuqinileyo, njl.
6. Ibhotile yesamente yesisele ingasetyenziselwa iitoni ezingama-50, iitoni ezili-100, iitoni ezingama-200, iitoni ezingama-300, iitoni ezingama-500, iitoni ezili-1000. Ubungakanani bokugqibela benziwe ngokweemeko zendawo kunye neemfuno zengingqi,
Inkqubo yokuBamba ngokuZenzekelayo, Zenzekelayo Umdibaniso Batching Machine, Ikhonkrithi Umxhubi Yiba nenceba, Inkqubo yokuDibanisa, Ngokuzenzekelayo ukudibanisa isichumisi Umxhubi, Inkqubo yokuBalwa kweDatha yokuBala,